Think Different » တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ ကို ကြင်နာမှု ပေးပါ ။	20
ခင်ဇော် says: ချစ်စရာ/သနားစရာလေးးးကွယ်။
Ma Ma says: ဒီမှာလည်း (လှည်းကူးမှာ ထင်တယ်) ခွေးတွေကို ပိုင်ရှင်မရှိရင် သွားပို့လို့ရတယ်။
ပြန်ရှာပြီးရရင် ရှဲလိုက်အုံးမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: တောက်ပိုဒွေအေ… သူများနိုင်ငံက တိုးတက်တော့ တောက်ပိုဒွေလုပ်ရဒယ်လေ ဒမာ လူတောင်ငတ်သေ သနားစယာဒွေပုံလို့ သတ္တ၀ါဒွေ ဘယ်သောက်ဖက်လုပ်နိုင်မလဲ…
မြစပဲရိုး says: ဒီ တစ်ခါ ဘာလို့ စဉ်းစား ဖို့ မခိုင်းတာလဲ အဘဖော။
Foreign Resident says:့ မြစပဲရိုး says:
Foreign Resident says: အင်းးးးး ၊ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ၊
Wow says: ပြောရရင်တော့ Nothing Personal ပါ။
ဒါပေသိကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်ရှေ့ ယပ်တောင်ခါးကြားထိုး သွားနေတာမြင်ရင် အမုန်းခံပြီးပြောချင်တာရယ်… ရွာထိန်းကတော့ ရင်းနှီးတာကြာတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲဝေဖန်သွားကြတာ… ဆိုတော့ တစ်ကန့်ပဲလွတ်သလား၊ မချူးဝါးပဲ မဖြစ်တာလား.. တစ်ချို့ဆို သေသည်အထိပြောင်းတာဟုတ်ဖူးရယ်.. နာတို့ဘကြီးတြောက်က အာ့မိုး… ကိုယ်တွေ့.. ပုံစံခြင်းတော့ နဲနဲကွာတာပေါ့လေ.. အပေါ်မှာ ချွိ၊ မမ၊ အရီးတို့ပြောသွားတာ တရိစာန်တွေကို မကြင်နာဘူး သတ်စားမယ် တစ်ခွန်းမှမပါ..
ကိုယ့်လူမျိူး လူသားအချင်းချင်း ဒုက္ခရောက်နေတာတွေ အများကြီးမို့ လူကိုဦးစားပေး ကူညီရမယ်ပြောသွားတာ… ဆိုတော့ လူတွေဒမြတိုက်လို့ သေသူသေ၊ ကျိုးပဲ့သူပဲ့၊ အိမ်မီးလောင်သူလောင် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ “ဟယ် ငါ့ကြောင်လေး ဘယ်နာသွားလဲ မသိဘူး၊ ငါ့ကြောင်လေးသနားကြပါ၊ သတ္တ၀ါတွေကို ညှာတာကြပါ” ဆိုတာမျိုးက ဓာတ်ရှင်ထဲက အရူးမတွေပဲ လုပ်တဲ့ အပေါက်မျိုး.. အာ့မိုး မြန်မာပြီမှာလုပ်လို့ကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေက အားနာတတ်တော့ ရတယ်… လွတ်ထားချင်ထားမယ်.. အာဖရိက အငတ်ဘေးဆိုဒ်နေတဲ့နေရာမျိုးသွားလုပ်ကျိ…
နာလေယဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန်စပွန်စာပေးပါ့မယ်.. ဗိုလ်စောရိုးတို့ ဆီက အကြွေးယူပြီးတော့ ပြောရတာ အားတော့နာတယ်ရယ်.. ဟီးးးး ဒါပေသိ ဒါမိုးဆိုတာ တည့်တည့်ပြောမှ နားဝင်တတ်တာမလား.. အောက်စလွတ်နေတာကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး မျက်စပစ်ပြနေရင်မပြီးတော့ဘူး… ဟေးးး နိအောက်စလွတ်နေတယ် ပေါ်တင်ပြောမှ..ပြီးသွားတတ်တာမျိုးကိုးးး ဆိုတော့ ကာလံဒေသံ ဆိုတာ ရှိတယ်ရယ်…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .(၁) စိတ်ထားကောင်းရင် ကံကောင်းမယ် ဆိုတာ လက်ခံပါတယ် ဘဖောရေ။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းနေတဲ့ လူတိုင်း စိတ်ထားကောင်းတယ်လို့တော့ ထင်ဘူးရှင့်။
Alinsett @ Maung Thura says: ဝင် ကြည့်မိတဲ့ ကိုယ့် ကိုယ်ကို ကိုယ် သနားမိပါတယ်
ကျနော့်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေသူ လို့ဘဲ ယူဆလို့ရပါတယ် ။ အခုကျနော်ပြောသွားခဲ့တာတွေမှာ ၊ အဓိက ချုပ်ရရင် ၃ ချက်ထဲ ပါဘဲ ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .တည့်တည့်ကြီးကို လွဲနေတာချင့်။ နောက်မှ သတ်သတ်ရှင်းတော့မယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . ကိုဘဖော says: ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင် ရဲ့ ညွှန်ကြားချက် တရားတော်တွေနှင့် အညီ နေထိုင်တာဟာ ၊
aye.kk says: ဤကမ္ဘာမှာသက်ရှိသတ္တဝါမှန်သမျှဟာ”မေတ္တာပေမ”ဆိုတာကို
Foreign Resident says: aye.kk says:
လုံမလေးမွန်မွန် says: စဉ်းစားမိတာက.. ခုနေ operation လုပ်ရမယ်ဆိုရင် အိမ်ရောင်းပြီး ဆေးဖိုးပေးရမယ်ထင်တယ်…
မြစပဲရိုး says: အဘဖော ပြောတာ ကို နားလည်ပါတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အရီးလတ်ကြီးကို အစိမ်းတွေ ပေးချင်တာ ဟိ၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာ သူဌေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့အိမ်က အယ်ဇေးရှင်းကြီး ၀ဖီးလို့ ။ သူ့အိမ်ရှေ့မှာ သရက်သီးလာကောက်တဲ့ ခလေးတွေကို အဲလူကြီးက အော်ထုတ်တတ်တယ်။
ကထူးဆန်း says: သြစီ ကနေ ပြန် တွန်းထုတ် တဲ့ လှေစီး သမား တွေ အကြောင်း ခေါင်းထဲ ရောက် လာမိပါရဲ့  ..
​ဒေါ် လေး says: ” ကျွန်မတို့ ရွှေပြည်မှာက ထမင်းမဝ လို့ စိတ်တို နေတဲ့ လူတွေ များနေတာမို့ တော်ရုံ သည်းခံတတ်ဖို့ မလွယ်တဲ့ အခြေအနေပါ။
အောင် မိုးသူ says: Kola လေးတွေက ချစ်စရာလေး